Muxuu Steve Jobs u bixin waayey injineeradiisa wax badan? | Wararka IPhone
Cristina Torres sawir-haye | | Wararka IPhone
La Falsafada Steve Jobs ee adduunka Apple Waa wax sii wadaya soo jiidashada dareenka, in kasta oo aasaasaha shirkaddu aanu sii noolaanayn, haddana wararka ayaa wali u muuqda kuwo la xidhiidha qaabkiisa fahamka ganacsiga. Laga yaabee horudhaca filimkaas muranka dhaliyay ee horey loogu raaxeysan karo tiyaatarada, ballanta maanta waxay qaadaneysaa xitaa kaalin taa ku haboon. Jid ahaan, waxaan u maleynayaa inay tahay qaacido wanaagsan in la beddelo jibbaarka oo laga fiirsado qaab cusub oo loo shaqeeyo xilliyadan dhibaatada.
Injineer la shaqeynayay shirkadda Apple, Evan Doll, ayaa ka xumaaday mushaharka uu u yimid markii uu ka shaqeynayay shirkadda. Waxay si dirqi ah ku gaadhay $ 1000 sanadkii uu la shaqeeyay iyaga. Sidaa darteed, wuxuu toos u weydiiyay Steve Jobs sababta loogu soo oogay wax aad u yar markii baloogku caan ku yahay ka soo horjeedka. Jawaabtii Steve Jobs waxay ahayd mid lama filaan ah waxayna ka muuqataa isbeddelka lagu wadaagay toddobaadkan shabakadda. «¿Maxaad uweydiisan weyday madaxdaada sababta ay ugu maleynayaan inaadan bixinaynin soocelin maaliyadeed oo wanaagsan? »
Waa in la dhahaa Evan Doll, injineerkaas oo ka cabanayay mushaharkiisa, sidoo kale jebisay qayb ka mid ah heshiiska, oo lacag ka sameysay sanadkaas ilo kale oo dakhli. Isla mar ahaantaana, waqtigiisii ​​shirkadaha waawayn waxay u oggolaatay inuu iibiyo horumarinno isaga ka helay qayb wanaagsan oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee uu haysto oo xitaa u oggolaaday inuu iska bixiyo amaahda jaamacadda oo uu helo lacag la mid ah. Hase yeeshe, gunaanadkiisu waa cad yahay in kabadan midna waa inay ogaadaan. Macno malahan inta saacadood ee aad shaqeyso, muhiimadu waa faa iidada dhaqaale ee aad u soo sheegto shirkada. Taas la'aanteed, mushaharku ma kordhin karo maxaa yeelay shirkaddu waxay ku nooshahay dakhliga soo gala, ee kuma noola saacadaha aad ku bixiso xafiiskeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Muxuu Steve Jobs u bixin waayey injineeradiisa wax badan?
Maxaad u weydiin weyday madaxdaada sababta ay ugu maleynayaan inaadan ku siinaynin soo celin maaliyadeed oo wanaagsan. Taasi maahan tarjumaadda saxda ah waxayna gabi ahaanba ka duwan tahay waxa ay dhab ahaan tilmaamayso ...
Waan ka xumahay inaan noqdo geestaas, laakiin si sax ah qoraagaan ayaa ka hadlaya waxqabadka ... Waxaa laga yaabaa inaad bilowdo inaad saacado badan ku bixisid shaashadda horteeda si aad u hubiso waxaad qortay, halkii aad ka walwali lahayd waxa aad ku guuleysanayso . Gebi ahaanba ka soo horjeedka waxa aad ku tiraahdo maqaalkaaga. Waxaad arki doontaa sida heerku u kici lahaa (taas oo ay si weyn u qadarin doonaan dhammaan akhristayaasha).
Ku jawaab Kyro
Wow, jawaab layaableh, maqaal xoog leh, waa wax layaableh sida weedho aad u tiro yar qoristu uga jawaabto xitaa su'aal aan la waydiinin, maxaay qorayaasha maqaalladaan mushaar badan u siin waayeen?
Ma uusan siin mushahar dheeri ah shaqaalaha maxaa yeelay wuxuu ahaa Hippy taajir noqday oo uusan rabin qofna inuu fursad u helo inuu ku guuleysto sidiisa oo kale.
Wuxuu ahaa aragti-waalan oo leh xirfado suuq-geyn wanaagsan. kaasoo si khaldan loogu sameeyay ikhtiraac-sameynta MAC-kii ugu horreeyay, markii uu sameeyay oo dhan wuxuu raadinayay ganacsi loogu talagalay qalab uu lammaanihiisu abuuray.
Dullinimo iyo saaxiibtinimo la'aan dhammaan dadkii hareerahiisa joogay. Weligiis ma qaddarin qofna shaqadiisa iyo inuu isagu aaminsan yahay inuu yahay udub-dhexaadka koonkan.
Qofna taajir kuma noqdo isagoon kuwa kale burburin dabeecaddani waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu wanaagsan.
Ka jawaab saccharine
Xanta kale waxay xaqiijineysaa in iPhone 7 uu noqon doono mid aan biyuhu xirin
Steve Jobs wuxuu isku dayay inuu kiraysto Kevin Lynch sanadkii 2010